Momba anay-Yantai Fushan Nanhua Packing Factory
Yantai Fushan Nanhua Packing Factory, naorina tamin'ny 1999, dia mpanamboatra matihanina mirotsaka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana sy ny fanompoana ny kitapo ao anaty boaty.
Natokana ho an'ny fanaraha-maso hentitra ny kalitao
Ny mpiasa efa za-draharaha dia afaka miresaka momba ny zavatra takinao ary miantoka ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa dia nampiditra andiana fitaovana mandroso ao anatin'izany ny Bag ao anaty boaty fanaovana milina, Solventless fitambarana milina sy tsindrona koronosy milina.
Ny vokatra isan-taona dia folo tapitrisa amin'ny alàlan'ny kitapo haingam-pandeha amin'ny milina fanaovana boaty, ny fizotran'ny Composite dia 450 metatra / min, mandritra izany fotoana izany, ny fiarovana ny sakafo dia azo antoka amin'ny Solvent Free Process, ny sisa tavela amin'ny solvent dia maimaim-poana amin'ny fampiasana dingana Composite haingam-pandeha.
Misy fanontaniana?Manana ny valiny izahay.
Nahazo mari-pankasitrahana ISO 9001 izahay.Mivarotra tsara any amin'ny tanàna sy faritany rehetra manodidina an'i Shina, ny vokatray dia aondrana any amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena sy faritra toy ny Vondrona Eoropeana, Afrika, Amerika Avaratra, Afovoany Atsinanana, Korea, sns.
Izahay koa dia mandray ny baiko OEM sy ODM.Na mifidy vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaogy izahay na mitady fanampiana ara-teknika ho an'ny fangatahanao, dia azonao atao ny miresaka amin'ny foibe serivisy mpanjifa momba ny fepetra takinao.Miaraka amin'ny traikefa 20 taona mahery amin'ity indostria ity, ny serivisy tsara sy matihanina aorian'ny varotra dia nahazo fanehoan-kevitra tsara avy amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa anay.
Jereo ny Certification
Tongasoa eto amin'ny fanamarinana ny orinasa eo amin'ny tranokala, ny kalitao sy ny serivisy dia tsy hahomby anao.